Anyị na-enyocha chaja ikuku site na ụlọ ọrụ Holife QC 3.0 | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwalere ntọala chaja wireless chaja Ikuku Ndenye chaja 3.0, nke ga - enyere anyị aka ịgba ụgwọ ekwentị anyị n'ụzọ dị mfe, nchekwa na ngwa ngwa. Typedị ikuku a ma ọ bụ chaja ntinye na-adị mma maka onye ọrụ ebe ọ bụ na anyị achọghị ijikọ eriri ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla iji malite ịgba ụgwọ, nanị ịtụkwasị smartphone n'elu na odori.
Na nke a anyị na-egosi nkọwa na arụmọrụ nke otu akara - Nnukwu, ma na ahịa e nwere ọtụtụ Ikuku chaja maka ngwaọrụ anyị. Ihe ọma banyere ihe ndị a bụ nnabata Qi, nke na-enye anyị ohere iji ya na ọnụọgụ enweghị ngwụcha ọnụ.
N'okwu a, anyị nwere ike iji Holife na ọhụụ ọhụrụ anyị iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Samsung S8, S7 Plus, S7 Edge, S6 Edge Plus, Galaxy Note 5 na ndị niile na-akwado nke a odori ọkọlọtọ. N'okwu a guzoro nwere peculiarity nke ịnakwere ngwa ngwa Nchaji na nke a dị mkpa n'oge ịzụta.
1 Nzube na nkọwa
2 Nkwado ụgwọ ngwa ngwa
Nzube na nkọwa
Banyere imewe nke a Holife guzo na-ana anyị ngwaọrụ anyị nwere ike ikwu na ọ bụ nke bara uru maka ikiri nlezianya na iji ya na tebụl, ọ dịkwa mma maka ịhapụ smartphone na tebụl akwa ahụ iji kwụọ ụgwọ.
Ya imewe nwere ụdị curvature na-eme ka ọ dịkwuo mfe adịgide ngwaọrụ ozugbo ebubo na-enye ohere odori ọ bụ ezie na ama enịm smartphone kwụ ọtọ. Nke a bụ uru ebe ọ bụ na ụfọdụ ụdị ebe ndị ana - akwụ ụgwọ anaghị ekwe ya. N'aka nke ọzọ anyị nwere Ikanam n'ihu nke na-egosi anyị ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ.
Otu ihe dị mkpa na nkọwa nke ntọala ndị a bụ nke ahụ O ji ihe ruru 1,5 ugboro ọsọ karịa chaja nkịtị ma onye nrụpụta agwalarị anyị na maka ụdị iPhone X, iPhone 8 na iPhone 8 Plus, ọ ga-akwụ ụgwọ na-ejighị ngwa ngwa. O nwekwara nchebe megide overvoltages, voltaji na nchebe megide obere sekit maka nchebe ka ukwuu.
Nkwado ụgwọ ngwa ngwa
N'oge a, ekwesịrị iburu n'uche na enwere ọtụtụ ụdị dị na Holife, site na nke anyị nwere isi na ihe nkwụnye ego na ihe ọ bụla ọzọ, na ụdị zuru oke nke na-agbakwunye njikọ mgbidi ahụ. N'ọnọdụ niile, ọ dị mkpa ịmata ụdị nke anyị na-azụ na ịmata nkọwa nke ngwaahịa iji mezuo ngwa ngwa. Ihe nlereanya Ngwa ngwa ngwa dị maka Samsung Galaxy S8, S8 +, S7, S7 Edge, S6 Edge Plus, Rịba ama 5. N'ihe banyere ụdị ọkọlọtọ Qi na-akwụ ụgwọ, ọ na-arụ ọrụ na ekwentị 8 / iPhone 8 Plus / iPhone X ị ga - eche na ndị a inwe ezigbo ụgwọ ngwa ngwa chọrọ chaja USB C.
Nchaji gbapụrụ ọsọ na ụfọdụ Samsung smartphones
Samsung Cheta 5: Oge 2 + 30 nkeji
Samsung S8: 3 Awa + 10 nkeji
Samsung S8 Plus: 3 Awa + 40 nkeji
Samsung S7: 2 Awa + 20 nkeji
Samsung S7 Edge: Oge 2 + 55 nkeji
Samsung S6 Edge Gụnyere: Oge 2 + 35 nkeji
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.na koodu a: Nwere ike ịzụta BWB96HJQ maka euro 15,99. Ya mere egbula oge ma wụpụ tupu nkwalite ahụ kwusiri.
Holife chaja na ụgwọ ngwa ngwa
Nzube na ịdị mfe nke iji
Anaghị ekpo oke ọkụ na ibu
Na ụfọdụ mkpuchi ọ naghị arụ ọrụ
Anaghị atụnye mgbidi jaak
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Anyị na-enyocha chaja ikuku nke ụlọ ọrụ Holife QC 3.0